Okungafunwa - Inxalenye 19 | Apg29
Okungafunwa - Inxalenye 19
Kule ndawo ndiya kukuxelela isiganeko ezibuhlungu kakhulu, oko kwenzeka uMikayeli njengoko wangena nalwa inxalenye yokugqibela.
Michael ndingumfundi ongaqhelekanga esikolweni. Andizanga ndinazi kuye. Andazi imvelaphi yakhe nokuba ungubani ngokwenene, ngaphezu koku, ndiyaqonda ukuba ootitshala kwakhe ingqalelo ukuba abe ngumfundi mdaka yaye kunzima.
Emva kokuba utitshala weklasi yam abathethise ngaye, ngoko ke nam liyi- ukuzithethelela. Ngenye imini, emva kweso siganeko, ke omnye umfundi lowo uxhatshazwa kum. Wandula ke wathabatha nam zokhuselo nizihlabe lo mntu ngamadolo akhe akubon 'ukuba uhleli phezu kwesitulo kunye nabanye abambalwa epasejini ngaphandle lokufundela ngexesha lekhefu. Bekungenjalo kakuhle kwenziwe, kodwa kuma nqa ecaleni babukele nje. Ndandingazi ukuba ndithini ngale meko. Ndikhumbula ukuba uze Sukumqhula Chris, kodwa kufuneka ube nobubele kuye, waza wabeka ngamadolo ezimbini emva kwakhe ayegqatse yena phantsi kwesitulo sobunzima bakhe.
UMichael mhlawumbi intliziyo umntu nobubele kakhulu yaye benza unothanda kakhulu unentliziyo elungileyo kodwa nokuba mdaka. Waya esikolweni ibhasi efanayo kum. Wasondela on umntu mil ngaphambili kwe apho ndafumana ngalo kwifama Skeen ukuya imayile ezimbini Ljungby.
Ngenye imva kwemini xa waya ekhaya elikhulu SJ ibhasi UMichael kunye umhlobo mdaka bakhe. Bathi romped, beduma, ngohlobo wabaleka emva naphambili washiya ejelo epasejini ibhasi, lo gama zonke ezinye abafundi bahlala ngokuzolileyo ngokweendawo zabo, nesibindi abathethi nto. Ngaloo ndlela Abantu ababini abatsha abeyithimbile phezu ibhasi ngenkolelo yokuba "wathabatha ibhasi" kwaye wenze ukuba njengoko abayithandayo. Lonke ikhilomitha ezimbini Ndahamba ibhasi phambi ukwehlika kwi stop yam, baqhubeka ngelixa umonde umqhubi webhasi waphela ngakumbi nangakumbi ngcaciso emfutshane yaye kungekudala ifikelele imida yayo.
Ngosuku olulandelayo, uMichael akwandixelela ukuba asenini nangokuzithemba kum, njengoko uhleli kwisitulo enye, yena icinezelwe loo mfo, oko kwenzekileyo ebhasini emva ukwehlika. Umqhubi webhasi ngomonde wazigxothayo ibhasi ekugqibeleni waba nomsindo ukuba wavuthulula ndinomsindo uphoswe yi Michael kunye nomhlobo wakhe ethile endleleni phambi kokuba baye kufika stop zabo.
Ndathi kokungenanto malunga nale, kodwa ndandisazi ngandlel 'ukuba umqhubi webhasi akukho kwanyanzeleka ukuba enze oko wakwenzayo. Kufuneka wazi ukuba ngelo xesha akukho uluvo. Andizange Boo okanye baa, mna nje ndaphulaphula kwaye wazama ukuba sithathe izinto kangangoko ndinako. Mna ndingumntu umhlalutyi akunjalo, mna bendingazi bekuya kuba yintoni kodwa nangayiphi na indlela ukuba ndimi sibukela kunye nje ndabukela. Andaba nguye umlinganiswa ophambili na idrama, kodwa abekho kuphela usaman kwaye ndineentloni kwaye engakhuselekanga encinane, lowo akabanga nabuganga ikuphazamisayo.
Oko kwenzeka elandelayo kunye ende inkwenkwe skranglige stökige ngubani yokungcungcuthekiswa nam waza wamemeza ngutitshala wam, andazi xa kufikwa iinkcukacha. Kodwa kwenzeka ntoni wacaphuka yeengxaki enogonyamelo. Bekuya kulothuse isikolo sonke kunye abafundi baya kuziva embi kunye namaphephandaba baya ubhale ngayo. Ingakumbi, ndiyazi ukuba endifunda naye esikolweni wathi waba eyethisa isisu siganeko.
UMichael umhlobo ogama Patrick wakhe ehamba omnye ngokuhlwa, kwidolophana ababehlala kuyo. Nazo nabanye abantu ababini okanye abathathu kanjalo baba phezu ngaloo ngokuhlwa sibi. Omnye wabo waba chain naye njengoko ngaphambili ngokuhlwa kaHolmes ishishini. Yaba ngetyathanga wayivala loo mali ekupheleni esivumelwano.
Xa wahlasela la uMichael oselula kunye neqabane lakhe. Michael wabethwa ubundlobongela kunye ngenkohlakalo kule kwikhonkco. Umhlobo wakhe UPatrick wasaba intamo phezu kwentloko. Wasinda, ngaphandle kukaMikayeli, walwa anegazi ukufa njengokuvuthululwa ekhohlaleleyo kwikhonkco.
intlanganiso wam Michael waqalisa ezingalungileyo kunjalo, ndakubetha wopha kuye, njengoko ndathi kuwe inxalenye yokugqibela. Kodwa saba ngabahlobo yaye intlonipho omnye komnye, ewe, wayezithethelela nam phambi kwabanye xa uxhatshazwa kum. Ndicinga ukuba uMikayeli ukuba unentliziyo elungileyo, nangona yokuba umqhubi webhasi yaba ucaphuka kangangokuba wavuthulula yena baphosa Michael kunye nomhlobo wakhe.
Mna okunene ke ndafumana umhlobo ixesha elifutshane ngaphambi kokuba ngale ndlela ngokungenalusini, lwasuswa ehlabathini.
Iflegi yesikolo kokuba indwe yesizwe ithotywe.
Zonke izabelo kude kangaka okungafunwa
Icandelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Vecka 16, fredag 19 april 2019 kl. 02:50